Hubka ay Sweden dalka dibaddiisa u dhoofiso oo hoos u dhacay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hubka ay Sweden dalka dibaddiisa u dhoofiso oo hoos u dhacay. Foto: Peter Weyde/Sveriges Radio
Hubka ay Sweden dalka dibaddiisa u dhoofiso oo hoos u dhacay
La daabacay onsdag 25 februari 2015 kl 15.48
Warbixin cusub oo ay soo saartay haayadda kormeerta aaladaha istaraatiijiga ah ayaa muujinaysa in uu 33% hoos u dhacay xaddaga hubka ay Sweden dibadda u dhoofisay sannadkii hore.
Madaxa haayaddan qiimaynta samaysay oo magaciisa la yidhaa Christer Ahlström ayaa hoos u dhacan ku sababeeyay in ay hore u dhoofiyeen dalab badan oo u yiilay.
- Tani waxa ay ku saabsan tahay, qalab iyo sanco ballaadhan oo cusub oo aanu dhoofinay. Sida diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaano JAS 39 iyo waliba taangiyada dagaalka ee loo yaqaano 90. Waa waxsoosaar ay lacag badani ka soo hoyatay, oo ay wakhti qaadanayso inta la dhoofiyaa, taasi ayaana keenaysa in la yidhaa hubkii loo dhoofinayay hoos buu u dhacay.
Kaasi waxa uu ahaa Christer Ahlström madaxa haayadda aaladaha istaraatiijiga ah
Sannadkii hore Sweden waxa ay dibadda u dhoofisay hub iyo qalab milatari oo gaadhaya 8 bilyan oo kr. Taasi oo ka 4 bilyan ka yar lacagtii ay hubka ku iibisay sannadkii hore. Hubkan ay Sweden dhoofisay badidiisa waxa ay u dhoofisay waddamada kale ee midowga Yurub iyo waddamada ay Sweden xidhiidhka shaqo ee dheer la leedahay ee ay ka mid yihiin Maraykanka, Kanada iyo Ustaraaliya. Tusaale ahaan, dalka Maraykanku waxa uu sannadkii hore ahaa dalkii aannu u dhaafinay hubkii ugu badnaa. Hubka aannu dalkaasi u dhoofinay waxa uu gaadhayay 1,5 bilyan oo kr, waxaanu ka badnaa hubkii ay Sweden u dhoofisay dalka Sucuudiga oo qiimihiisu ahaa nus bilyan kr.
Christer Ahlström ayaa sheegay in ay adag tahay in LA qiyaaso xaddiga hubka sannad kasta la dhoofiyo. Maaddaama oo uu dalabku markasta kala duwan yahay.
- Haddii aynu dib u yara eegno hubkii aynu dhoofinay sannadkii 2011, waxa uu qiyaastii ahaa 13,9 bilyan oo kr, halka uu sannadkii 2012 ahaa 9,8 bilyan oo kr. Halkaasina waxa aynu ka arki karnaa hoos u dhaca labadaa sannadood u dhexeeya. Laakiinse haddii aynu eegno sannaddii 2012 iyo 2013, waxa aynu arkaynaa in 22% uu kor u kacay waxsoosaarka hubku. Taasina waxa ay ina tusaysaa kala duwanaanshaha u dhexeeya sannaddadaa.